Dowlada Soomaaliya oo la filayo in ay saacadaha Soo Socdo war cad ka soo saarto Xiisada Balad Xaawo – Daily Som
Dowlada Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha Soo socda ay war ka soo saarto Xiisada ka taagan Magaalada Balad Xaawo ee Gobalaka Gedo, taas oo ay gar wadeen k atahay Dolwda Kenya oo la sheegay in ay dhul boob baahsan ka wado Xadka.
Warar ka soo baxaya Villa Somaliya ayaa sheegaya uu socodo kulamo isdaba joog ah oo ka dhan ah Damaca Waalan ee Kenya ka wado Dhulka Soomaaliyeed ee Gobalka Gedo.
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Fedaraalka ah ee Soomaaliya oo la filayo in uu war cad ka soo saaro Xiisada ayaa xalay waxa uu kulamo la qaatay Gudiga Joogtada ah ee Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya iyo xildhibaano kale oo ka tirsan Baarlamaanka.
Ra’isul wasaare Khayre ayaa waxaa kulankiisii xalay ky wehliyay Xubno ka tirsan Xukuumadiisa oo ay hor kacayaan Wasiirada Arimaha Dibada iyo Gudaha waxa ayna kaga hadleen Arinta Kenya ee Blkada Xaawo.
Dowlada Soomaaliya oo la filayo in ay saacadaha Soo Socdo war cad ka soo saarto Xiisada Balad Xaawo added by Staff on March 25, 2018